बिदेश जानेका लागि कोरोना जाँच, यी हुन् अनुमति प्राप्त अस्पताल ! – rastriyakhabar.com
बिदेश जानेका लागि कोरोना जाँच, यी हुन् अनुमति प्राप्त अस्पताल !
काठमाडौं । सरकारले विदेश जानेका लागि पिसिआर परिक्षण गर्नलाई स्वास्थ्य संस्थाहरु तोकेको छ । कारोना महामारीको समयमा पनि विभिन्न कामले गर्दा विदेश नगई नहुनेहरुको लागि पिसिआर परिक्षण गर्न विभिन्न अस्पताललाई अनुमति दिएको हो ।
सरकारले पैसा तिरेर पिसिआर परिक्षण गर्नका लागि ११ वटा अस्पताल तोकेको छ । उपत्यका भित्र सरकारले वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र टिचिङ अस्पताल गरी पिसिआर परिक्षणको लागि तिन वटा अस्पताललाई तोकेको छ ।
त्यस्तै सरकारले उपत्यका भन्दा बाहिर सेती अस्पताल, कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, लुम्बिनी अस्पताल र कर्णाली प्रदेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, सुर्खेतलाई पिसिआर परिक्षण गर्न अनुमति दिएको हो ।
सरकारले बिदेशी नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले पिसिआर गर्न परे उपत्यकामा रहेको निजि अस्पतालहरुमा गर्न सक्ने बताएको छ । त्यसको लागि सरकारले ललितपुरमा रहेको स्टार अस्पताल र काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई अनुमति दिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा.जागेश्वर गौतमले सरकारले तोकेको र अनुमति दिएको अस्पतालमा मात्र पिसिआर गर्न आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार, साउन ९, २०७७ मा प्रकाशित